Mangarivotra – Toamasina : Ramatoa iray 30 taona maty voatifitra teo ambony posy… (Midi-Madagascar) | AEMW
Mangarivotra – Toamasina : Ramatoa iray 30 taona maty voatifitra teo ambony posy… (Midi-Madagascar)
Miverina indray ankehitriny ireo andian-jiolahy mitam-piadiana P.A mpitaingina Scooter eto Toamasina, raha tsy henoheno ny momba azy ireto tao taorian’ny volana jona. Ny alatsinainy tokony tamin’ny 05ora hariva, niara-nody nitaingina posy tamin’ny mpampiasa azy izay tera-tany karana. Nanafin’endrika tao anaty na aro loha ireto jiolahy, lasan’izy ireo vola 04 tapitrisa ariary nandritra izany.
Loharanom-baovao. Nandritra ny fitohanan’ny lalana teo amin’ny tetezan’Ambalomadinika mifanandrify indrindra ny paositra no nitrangan’ny fanafihana. Tsy nisy nanampo ireo mpandalo rehetra raha tsy efa nipoaka ny basy, taorian’ny fisintonan’ireto jiolahy ilay ramatoa 30 taona teo ambonin’ny posy, ka nitifiran’izy ireo azy teo amin’ny vavany izay nivoaka tao amin’ny hatony afara raha saika hiantso vonjy; avy hatrany dia nidaraboka tamin’ny tany izy, ny fahalasanan’ireo jiolahy vao namonjy azy ireo olona manodidina saingy efa tsy tana ny ainy vao tonga teny amin’ny hopitaly tamin’ny 07ora hariva. Ny fanazavan’ny mpitandro ny filaminana no nahafantarana fa tsara loharanom-baovao ireto jiolahy ireto. Tsy naninona kosa ny mpampiasa azy na iray posy taminy aza nandritra izany.
Mihantsy. Tsy ela fa vao nahazo antso ireo mpitandro ny filaminana dia tonga nijery sy nanao fanadiadiana ity resaka fanafihana mitam-piadiana ity. Avy hatrany dia nisy ihany koa ny fanarahan-dia nataon’izy ireo ny lalana nitsoahan’ireto jiolahy araka ny fanazavana nomen’ireo nahita ny fanafihana, saingy efa tsy tratra intsony ireto andian-jiolahy ireto. Andian-jiolahy efatra izy ireto izay manao taingin-droa amin’ny Scooter roa, ka ny andian’ny roa mpanara-maso ny manodidina, ny roa hafa kosa sady no mpitondra ny basy. “Tena fihantsiana atao amin’ny mpitandro ny filaminana izao. Hain’ireo andian-jiolahy tsara fa manao ezaka hametrahana filaminam-bahoaka izahay. Nefa anjarany aloha izao fa tsy ho ela dia ho avy ny anjaranay…” hoy ireo mpitandro ny filaminana naneho ny heviny.
Taorian’ity fanafihana mitam-piadiana tao Mangarivotra ny alatsinainy teo ity, dia nohamafisin’ny mpitandro ny filaminana ny fisavana ireo Scooter mifamezivezy eto Toamasina. Nohenjanina ihany koa ny fanaraha-maso eran’ny tanàna na andro, na hariva, na alina ataon’ireo mpitandro ny filaminana…
The post Mangarivotra – Toamasina : Ramatoa iray 30 taona maty voatifitra teo ambony posy… appeared first on Midi Madagasikara.
@dmin August 24, 2016 Midi-Madagascar No Comments
← Rugby – CAN Juniors 1B : Les Makis prêts, les Ougandais débarquent (Midi-Madagascar)
RN25 : Taxi-brousse nisy nanafika, mpandeha iray naratra mafy (Midi-Madagascar) →